MacBook Air in 2019 - Technoland Myanmar
MacBook Air in 2019
Posted on December 6, 2018 December 7, 2018 by Technoland Editor
၂၀၁၉ မှာ Macbook Air ကို ဝယ်သင့်သေးလား?
တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ထဲမှာ ငွေလေး ပိုပိုလျှံလျှံလည်း ရှိနေမယ်။ Laptop လေးတစ်လုံးလောက်လည်း လိုနေမယ်။ Apple product ကိုလည်း သုံးချင်တယ်ဆိုပါစို့။ အရင်ဆုံး စဉ်းစားမိမှာက MacBook series တွေထဲမှာ ဈေးအသက်သာဆုံး MacBook Air ပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ 8th Gen Intel CPU ပါတဲ့၊ အများကြီးပိုပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ Core i5 laptop တွေကို ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ အောက်နဲ့ ဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ အခုလိုအချိန်မှာ ပန်းသီးတံဆိပ်လေးကို မက်ပြီး MacBook Air ကို ဝယ်သင့်သေးရဲ့လားဆိုတာ တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
တကယ်လို့ ကိုယ်က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သုံးရတာကို ကြိုက်တယ်။ ဘက်ထရီအားခံတာကို ကြိုက်တယ်။ ရုံးအလုပ်လေး ဘာလေး နည်းနည်းပါးပါးလုပ်မယ်။ ဗီဒီယိုလေးဘာလေး ကြည့်မယ်။ ဂိမ်းတွေဘာတွေ သိပ်မဆော့ဘူး။ Program အကြီးကြီးတွေ မသုံးဘူးဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အမြင်မှာတော့ MacBook Air က built quality ကောင်းပြီး battery ခံတာကလွဲရင် တခြားနေရာတွေမှာ သိပ်ပြီးအဆင်မပြေနိုင်တော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို အောက်ကအချက်တွေနဲ့ ရှင်းပြပါမယ်။
1. Retina Screen မပါပါဘူး။
MacBook Air ရဲ့ resolution ဟာ 1440×900 ပဲ ရှိပါတယ်။ Retina Screen မဟုတ်ပါဘူး။ Pixel density ကလည်း 127ppi ပဲရှိပါတယ်။ 13.3 inches screen မှာ 127 ppi density ဆိုတော့ ပုံရိပ်တွေမပြတ်သားတာက လုံးဝသိသာပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့လောက်ပဲသုံးမယ်ဆို အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပေမဲ့ 1080p ရုပ်ရှင် တွေကြည့်ရင်တောင် resolution အပြည့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
2. ဘေးဘောင်တွေက အရမ်းထူပါတယ်။
MacBook Air ကို အနောက်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် လှပကျော့ရှင်းတဲ့ design ကို မြင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့
screen ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့ ဘောင်တွေက အရမ်းကိုထူလွန်းပါတယ်။ ၂၀၁၉ မှာ အဲ့လို design မျိုးက သိပ်ပြီး
3. Type – C port မပါပါဘူး။
MacBook Air မှာ type A port ပါတယ်ဆိုတာက အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်နေပေမဲ့ Type – C နဲ့ Thunderbolt port မပါတာကတော့ အားနည်းချက်တစ်ခုလို့ မြင်မိပါတယ်။ Type C port ပါတယ်ဆိုရင် အားသွင်းတာရော၊ တခြားဖုန်းတွေဆီ data ကူးပြောင်းတာရော၊ monitor တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တာတွေကိုပါ port တစ်ခုတည်းနဲ့ သုံးနိုင်တဲ့အတွက် future proof ဖြစ်အောင် Type – C port လေးတော့ ထည့်ထားပေးသင့်ပါတယ်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင် MacBook Air ရဲ့ အဓိက ကောင်းကွက်တွေက keyboard, built quality နဲ့ battery life ဖြစ်တာကြောင့် laptop နဲ့ စာရေးလေ့ရှိတဲ့ စာရေးဆရာတွေ၊ assignment တွေ လုပ်ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ accounting software နည်းနည်းပါးပါးသုံးရတဲ့ စာရင်းကိုင်တွေအတွက်လောက်ပဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ dedicated GPU မပါတဲ့အတွက် 3D rendering လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ၊ game ဆော့ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ photo editing အတွက်ကလည်း screen က သိပ်အကောင်းကြီးမဟုတ်တာကြောင့် အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား performance အများကြီးပိုကောင်းလာတဲ့ 8th gen processor ပါတဲ့ ဈေးနှုန်းတူ Windows laptop တစ်လုံးကို သုံးလိုက်တာက အများကြီးပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ MacBook Air ဝယ်မယ်ဆိုရင် သေသေချာချာ စဉ်းစားဖို့လိုပြီလို့ အကြံပေးရင်း မနက်ဖြန်မှာ ဘာအကြောင်းတွေတင်မလဲဆိုတာ စောင့်ဖတ်ကြပါဦး။
၂၀၁၉ မှာ Macbook Air ကို ဝယျသငျ့သေးလား?
တကယျလို့ ကိုယျ့ရဲ့ လကျထဲမှာ ငှလေေး ပိုပိုလြှံလြှံလညျး ရှိနမေယျ။ Laptop လေးတဈလုံးလောကျလညျး လိုနမေယျ။ Apple product ကိုလညျး သုံးခငျြတယျဆိုပါစို့။ အရငျဆုံး စဉျးစားမိမှာက MacBook series တှထေဲမှာ ဈေးအသကျသာဆုံး MacBook Air ပဲ ဖွဈမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ 8th Gen Intel CPU ပါတဲ့၊ အမြားကွီးပိုပွီး စှမျးဆောငျရညျကောငျးတဲ့ Core i5 laptop တှကေို ဒျေါလာ ၁,၀၀၀ အောကျနဲ့ ဝယျလို့ရနိုငျတဲ့ အခုလိုအခြိနျမှာ ပနျးသီးတံဆိပျလေးကို မကျပွီး MacBook Air ကို ဝယျသငျ့သေးရဲ့လားဆိုတာ တဈခကျြပွနျစဉျးစားကွညျ့ရအောငျ။
တကယျလို့ ကိုယျက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သုံးရတာကို ကွိုကျတယျ။ ဘကျထရီအားခံတာကို ကွိုကျတယျ။ ရုံးအလုပျလေး ဘာလေး နညျးနညျးပါးပါးလုပျမယျ။ ဗီဒီယိုလေးဘာလေး ကွညျ့မယျ။ ဂိမျးတှဘောတှေ သိပျမဆော့ဘူး။ Program အကွီးကွီးတှေ မသုံးဘူးဆိုရငျတော့ တဈမြိုးပေါ့။
ဒါပမေဲ့ ကြှနျတော့ရဲ့ အမွငျမှာတော့ MacBook Air က built quality ကောငျးပွီး battery ခံတာကလှဲရငျ တခွားနရောတှမှော သိပျပွီးအဆငျမပွနေိုငျတော့ပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာကို အောကျကအခကျြတှနေဲ့ ရှငျးပွပါမယျ။
1.Retina Screen မပါပါဘူး။
MacBook Air ရဲ့ resolution ဟာ 1440×900 ပဲ ရှိပါတယျ။ Retina Screen မဟုတျပါဘူး။ Pixel density ကလညျး 127ppi ပဲရှိပါတယျ။ 13.3 inches screen မှာ 127 ppi density ဆိုတော့ ပုံရိပျတှမေပွတျသားတာက လုံးဝသိသာပါတယျ။ ရုပျရှငျကွညျ့ဖို့လောကျပဲသုံးမယျဆို အဆငျပွတေယျလို့ ပွောခဲ့ပမေဲ့ 1080p ရုပျရှငျ တှကွေညျ့ရငျတောငျ resolution အပွညျ့ရမှာ မဟုတျပါဘူး။
2. ဘေးဘောငျတှကေ အရမျးထူပါတယျ။
MacBook Air ကို အနောကျဘကျကကွညျ့မယျဆိုရငျ လှပကြော့ရှငျးတဲ့ design ကို မွငျရမှာဖွဈပမေဲ့
screen ဘေးပတျလညျမှာရှိတဲ့ ဘောငျတှကေ အရမျးကိုထူလှနျးပါတယျ။ ၂၀၁၉ မှာ အဲ့လို design မြိုးက သိပျပွီး
MacBook Air မှာ type A port ပါတယျဆိုတာက အားသာခကျြတဈခုဖွဈနပေမေဲ့ Type – C နဲ့ Thunderbolt port မပါတာကတော့ အားနညျးခကျြတဈခုလို့ မွငျမိပါတယျ။ Type C port ပါတယျဆိုရငျ အားသှငျးတာရော၊ တခွားဖုနျးတှဆေီ data ကူးပွောငျးတာရော၊ monitor တှနေဲ့ခြိတျဆကျတာတှကေိုပါ port တဈခုတညျးနဲ့ သုံးနိုငျတဲ့အတှကျ future proof ဖွဈအောငျ Type – C port လေးတော့ ထညျ့ထားပေးသငျ့ပါတယျ။
အဆုံးသတျအနနေဲ့ပွောရရငျ MacBook Air ရဲ့ အဓိက ကောငျးကှကျတှကေ keyboard, built quality နဲ့ battery life ဖွဈတာကွောငျ့ laptop နဲ့ စာရေးလရှေိ့တဲ့ စာရေးဆရာတှေ၊ assignment တှေ လုပျရတဲ့ ကြောငျးသားတှေ၊ accounting software နညျးနညျးပါးပါးသုံးရတဲ့ စာရငျးကိုငျတှအေတှကျလောကျပဲ အဆငျပွမှောပါ။ dedicated GPU မပါတဲ့အတှကျ 3D rendering လုပျခငျြတဲ့သူတှေ၊ game ဆော့ခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။ photo editing အတှကျကလညျး screen က သိပျအကောငျးကွီးမဟုတျတာကွောငျ့ အလုပျလုပျရတာအဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား performance အမြားကွီးပိုကောငျးလာတဲ့ 8th gen processor ပါတဲ့ ဈေးနှုနျးတူ Windows laptop တဈလုံးကို သုံးလိုကျတာက အမြားကွီးပိုအဆငျပွမှောပါ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ၂၀၁၉ ခုနှဈဟာ MacBook Air ဝယျမယျဆိုရငျ သသေခြောခြာ စဉျးစားဖို့လိုပွီလို့ အကွံပေးရငျး မနကျဖွနျမှာ ဘာအကွောငျးတှတေငျမလဲဆိုတာ စောငျ့ဖတျကွပါဦး။
This entry was posted in Articles and tagged Apple, MacBook Air.
8K TV: All You Need to Know
Top5Qualcomm Snapdragon 855 features